သူတျောကောငျးတို့ကငျြ့စဉျတှထေဲမှာ ဝစီပိတျကငျြ့စဉျ ပါသလား - Bamakhit
Home ဗဟုသုတ သူတျောကောငျးတို့ကငျြ့စဉျတှထေဲမှာ ဝစီပိတျကငျြ့စဉျ ပါသလား
သူတျောကောငျးတို့ကငျြ့စဉျတှထေဲမှာ ဝစီပိတျကငျြ့စဉျ ပါသလား
လောကတှငျ ပညာမဲ့တို့သညျ ပညာရှိတို့ထကျ ပို၍အငျအားမြားပွား၏။ထိုပညာမဲ့ အမြားစုတို့သညျ တကယျ့အစဈအမှနျလား …. အတုအယောငျလား … ဆိုသညျကို မိမိတို့ ဉာဏျဖွငျ့ဆနျးစဈဝဖေနျနိုငျခွငျးမရှိလရေကား
မညျသညျ့အရပျဒသေ၌ မညျသို့သောသူ မညျသို့သောအရာသညျ ထူးခွားဆနျးကွယျနသေညျဟု သဲ့သဲ့မြှ ကွားလြှငျပငျ ထိုနရောသို့ဦးစှာရောကျသှားတတျစမွဲဖွဈ၏ ။
ဤ ၌ စဉျးစားဉာဏျ အသငျ့အတငျ့ရှိသူပငျလြှငျ အနညျးအကဉျြးမြှတော့ တှဝေငေေးမောသှားတတျ၏။စငျစဈလူဆိုသညျမှာ အထူးအဆနျးဆိုပါက စိတျဝငျစားတတျကွသညျ မဟုတျပါလား . . . . ။
ယခုကာလ၌ ” မညျသညျ့ပုဂ်ဂ်ဂ်ဂိုလျသညျ ဝစီပိတျအကငျြ့ကို ကငျြ့နသေညျ ” ဟူသော သတငျးစကားကို ကွားလြှငျ အထူးအဆနျးဖွဈကာ ထို ပုဂ်ဂ်ဂ်ဂိုလျထံသို့ သှားရောကျ ဆညျးကပျလရှေိ့ကွသညျ။ပညာရှိသူတျောကောငျးမြား လုပျလလေု့ပျထ မရှိခွငျးကို မစဉျးစား။
ဘုရားရှငျ သကျတျောထငျရှားရှိစဉျအခါက ဖွဈသညျ။
ရဟနျတျောတဈစုသညျ ကောသလတိုငျးအတှငျးရှိ ဇရပျ ၌ သှားရောကျဝါဆိုကာ ဝစီပိတျအကငျြ့ကို ကငျြ့စဉျတဈရပျအဖွဈ ကငျြ့ခဲ့ကွ၏။
ထိုသို့ ဝါတှငျးတဈတှငျးလုံး ဝစီပိတျကငျြ့စဉျကို ကငျြ့ခဲ့ကွပွီး ဝါကြှတျသညျရှိသျော ဘုရားရှငျအား ဖူးမွျောရနျအတှကျ သာဝတ်ထိပွညျ ဇတေဝနျကြောငျးတျောသို့ ထှကျလာခဲ့ကွသညျ။
ဘုရားရှငျထံ ရောကျရှိဖူးမွျောကွပွီးလသေျော . . . ဘုရားရှငျက ခဈြသားတို့ .. . သငျတို့သညျ ခမျြးခမျြးသာသာ နထေိုငျကာ တရားကငျြ့ခဲ့ပါသလော ဟု မေးတျောမူလသေညျ။
ထိုအခါ ရဟနျးတို့က ” အရှငျဘုရား . . .တပညျ့တျောတို့သညျ ခမျြးခမျြးသာသာဖွငျ့ ဝစီပိတျအကငျြ့ကို ကငျြ့ခဲ့ကွပါသညျ ဟု ဖွကွေားလသေညျ။
ဤတှငျ ဘုရားရှငျလညျး ” ဟယျ မဂျဖိုလျမရ ၊ အခညျြးနှီးသော ယောကျြားတို့ ….သငျတို့ကား ခွင်ျသေ့ ၊ သဈ ၊ကြားတို့နထေိုငျခွငျး၊ ရနျသူတို့၏ နထေိုငျခွငျးဖွငျ့နထေိုငျပွီး စကားမပွော တုံဏှိဘောနဲ့ နထေိုငျခဲ့ကွတာကိုတောငျမှ ခမျြးခမျြးသာသာနထေိုငျရတယျလို့ ဆိုတယျ၊ ဝနျခံကွတယျ။
သငျတို့ဟာ တိတ်ထိဂိုဏျးဝငျတှေ ဆောကျတညျကငျြ့သုံးလရှေိ့တဲ့ ” မူဂဗ်ဗတ ” လို့ဆိုတဲ့ ဆှံ့အသူတို့ရဲ့ အကငျြ့ကို ဘာကွောငျ့ကငျြ့သုံးရသလဲ ၊ သငျတို့ကငျြ့တဲ့ ဝစီပိတျအကငျြ့ဟာ မကွညျညိုသေးသူတှကေို ကွညျညိုဖို့မဖွဈစနေိုငျသလို ၊ ကွညျညိုပွီးတဲ့သူတှကေိုလညျး တိုးပွီး မကွညျညိုစနေိုငျဘူး ၊ သညျတော့ ” ဝစီပိတျကငျြ့တဲ့ ရဟနျးမှနျသမြှ ဒုက်ကဋျ အာပတျသငျ့စေ” ဟူ၍ ပညတျတျောမူခဲ့သညျ။
သို့ဖွဈ၍ ” ဝစီပိတျ အကငျြ့ ” စသညျတို့ကို မသိသူတို့က အကငျြ့ကောငျးတဈခုဟု ထငျမှတျနကွေသျောလညျး အမှနျစငျစဈ မူကား ဘုရားရှငျကိုယျတျောမွတျကွီးကိုယျတျောတိုငျ ပိတျပငျတားမွဈတျောမူခဲ့သညျ့ အကငျြ့ပငျ ဖွဈလသေညျ။
နန်ဒာမိုးကွယျ စာအုပျမှ ထုတျနှုတျဖျောပွပါသညျ။( D Nae Khit )
သူတော်ကောင်းတို့ကျင့်စဉ်တွေထဲမှာ ဝစီပိတ်ကျင့်စဉ် ပါသလား
လောကတွင် ပညာမဲ့တို့သည် ပညာရှိတို့ထက် ပို၍အင်အားများပြား၏။ထိုပညာမဲ့ အများစုတို့သည် တကယ့်အစစ်အမှန်လား …. အတုအယောင်လား … ဆိုသည်ကို မိမိတို့ ဉာဏ်ဖြင့်ဆန်းစစ်ဝေဖန်နိုင်ခြင်းမရှိလေရကား
မည်သည့်အရပ်ဒေသ၌ မည်သို့သောသူ မည်သို့သောအရာသည် ထူးခြားဆန်းကြယ်နေသည်ဟု သဲ့သဲ့မျှ ကြားလျှင်ပင် ထိုနေရာသို့ဦးစွာရောက်သွားတတ်စမြဲဖြစ်၏ ။
ဤ ၌ စဉ်းစားဉာဏ် အသင့်အတင့်ရှိသူပင်လျှင် အနည်းအကျဉ်းမျှတော့ တွေဝေငေးမောသွားတတ်၏။စင်စစ်လူဆိုသည်မှာ အထူးအဆန်းဆိုပါက စိတ်ဝင်စားတတ်ကြသည် မဟုတ်ပါလား . . . . ။
ယခုကာလ၌ ” မည်သည့်ပုဂ္ဂ္ဂ္ဂိုလ်သည် ဝစီပိတ်အကျင့်ကို ကျင့်နေသည် ” ဟူသော သတင်းစကားကို ကြားလျှင် အထူးအဆန်းဖြစ်ကာ ထို ပုဂ္ဂ္ဂ္ဂိုလ်ထံသို့ သွားရောက် ဆည်းကပ်လေ့ရှိကြသည်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းများ လုပ်လေ့လုပ်ထ မရှိခြင်းကို မစဉ်းစား။
ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါက ဖြစ်သည်။
ရဟန်တော်တစ်စုသည် ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ ဇရပ် ၌ သွားရောက်ဝါဆိုကာ ဝစီပိတ်အကျင့်ကို ကျင့်စဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် ကျင့်ခဲ့ကြ၏။
ထိုသို့ ဝါတွင်းတစ်တွင်းလုံး ဝစီပိတ်ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်ခဲ့ကြပြီး ဝါကျွတ်သည်ရှိသော် ဘုရားရှင်အား ဖူးမြော်ရန်အတွက် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ ထွက်လာခဲ့ကြသည်။
ဘုရားရှင်ထံ ရောက်ရှိဖူးမြော်ကြပြီးလေသော် . . . ဘုရားရှင်က ချစ်သားတို့ .. . သင်တို့သည် ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်ကာ တရားကျင့်ခဲ့ပါသလော ဟု မေးတော်မူလေသည်။
ထိုအခါ ရဟန်းတို့က ” အရှင်ဘုရား . . .တပည့်တော်တို့သည် ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့် ဝစီပိတ်အကျင့်ကို ကျင့်ခဲ့ကြပါသည် ဟု ဖြေကြားလေသည်။
ဤတွင် ဘုရားရှင်လည်း ” ဟယ် မဂ်ဖိုလ်မရ ၊ အချည်းနှီးသော ယောက်ျားတို့ ….သင်တို့ကား ခြင်္သေ့ ၊ သစ် ၊ကျားတို့နေထိုင်ခြင်း၊ ရန်သူတို့၏ နေထိုင်ခြင်းဖြင့်နေထိုင်ပြီး စကားမပြော တုံဏှိဘောနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ကြတာကိုတောင်မှ ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရတယ်လို့ ဆိုတယ်၊ ဝန်ခံကြတယ်။
သင်တို့ဟာ တိတ္ထိဂိုဏ်းဝင်တွေ ဆောက်တည်ကျင့်သုံးလေ့ရှိတဲ့ ” မူဂဗ္ဗတ ” လို့ဆိုတဲ့ ဆွံ့အသူတို့ရဲ့ အကျင့်ကို ဘာကြောင့်ကျင့်သုံးရသလဲ ၊ သင်တို့ကျင့်တဲ့ ဝစီပိတ်အကျင့်ဟာ မကြည်ညိုသေးသူတွေကို ကြည်ညိုဖို့မဖြစ်စေနိုင်သလို ၊ ကြည်ညိုပြီးတဲ့သူတွေကိုလည်း တိုးပြီး မကြည်ညိုစေနိုင်ဘူး ၊ သည်တော့ ” ဝစီပိတ်ကျင့်တဲ့ ရဟန်းမှန်သမျှ ဒုက္ကဋ် အာပတ်သင့်စေ” ဟူ၍ ပညတ်တော်မူခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်၍ ” ဝစီပိတ် အကျင့် ” စသည်တို့ကို မသိသူတို့က အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဟု ထင်မှတ်နေကြသော်လည်း အမှန်စင်စစ် မူကား ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်တိုင် ပိတ်ပင်တားမြစ်တော်မူခဲ့သည့် အကျင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။
နန္ဒာမိုးကြယ် စာအုပ်မှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။( D Nae Khit )
Previous articleကိုဗစ်ဂျူတီကနေ ပြန်လာတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်သူနာပြုမလေးကို၊ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားက အဓမ္မကျင့်
Next articleကသာခရိုငျတှငျ မိုးသကျလပွေငျးကွောငျ့ နအေိမျ ၃၀၀ ကြျော အမိုးလနျပကျြစီး